Kooxda Real Madrid oo qorsheeneysa in xidig muhiim ah ay ka afduubato Manchester City – Gool FM
(Real Madrid) 11 Okt 2018.Kooxda Real Madrid ayaa dooneysa inay ku guuleysato saxiixa xidiga kooxda Manchester City inta lagu jiro suuqa kala iibsiga ee soo aadan.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Mirror” ee dalka England kooxda Real Madrid ayaa si dhow u eeganeysa wadahadalada ay ku dooneyso in kooxda Manchester City ay kala soo saxiixato laacibkeeda Raheem Sterling.
Inkastoo Real Madrid ay si xoogan u xiiseeneyso lasoo saxiixashada Eden Hazard, hadana maamulka kooxda reer Spain ayaa fahansan in Sterling uu noqon karo xidig weyn.
Dhinaca kale maamulka kooxda Manchester City ayaa la fahansan yahay inay dadaal xoogan ku bixin doonaan in heshiis cusub ay ka saxiixdaan Raheem Sterling, maadaama heshiiskiisa uu dhacayo kadib 18 bilood.
Wargeyska ayaa sheegay in Real ay si hoose u eeganeyso xaalada Sterling, waxayna dooneysaa in suuqyada soo aadan ay ka faa’ideysato xaalada laacibka si ay ula soo saxiixato.